Laamaha ammaanka oo rag la tuhunsan yahay ku qabtay Muqdisho | Dhacdo
Home Wararka Maanta Laamaha ammaanka oo rag la tuhunsan yahay ku qabtay Muqdisho
Laamaha ammaanka oo rag la tuhunsan yahay ku qabtay Muqdisho
Laamaha ammaanka ayaa maanta Magaalada Muqdisho waxay ku qabteen saddex nin oo la tuhunsan yahay, kuwaa oo midkood uu hubeysnaa.
Hawlgal ka dhacay Aargada Degmada Dayniile ayaa lagu soo qabtay raggaasi, xilli ay wateen mooto bajaaj, sida uu xaqiijiyay Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Dhamme Sadiiq Aadan Cali (Doodisho) ayaa sheegay in maalmahaanba la waday hawlgalo lagu baacsanayo kooxaha argagixisada iyo burcadda qowleysatada.
“Ayaantaanba waxaa socday hawlgalo qorsheysan oo lagula dagaalamayo ama lagu baacsanayo argagixisada baneysatay dhiigga, nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed iyo kooxaha burcadda qowleysatada ah ee dadka dhexdooda ku dhuumaaleysta ee duleysta.” Ayuu yiri Afhayeenka.
Afhayeenka ayaa bidhaamiyay in dadka reer Dayniile ay ashtako ka soo gudbiyeen raggaasi, oo ay ku eedeeyeen in ay dhac u gaysteen, ka dibna ay ka hawlgaleen xoogaga ammaanka.
“Maanta Degmada Dayniile abaare barqadii koox burcad oo qowleysata ah warbixino aanu ka helnay dadka shacabka ayaa ashtako nooga timid, oo nalooga soo dacwooday, marka hawlgaladii la qaaday ayaan ku soo qabanay illaa saddex burcad ah, oo mid ka mida uu hubeysan yahay, isla-markaana mooto bajaaj watay, kuna dhacaayay dadka shacabka ah hawl maalmoodkooda caadiga ah ku jira, marka burcadaas gacantaa ku soo dhignay.” Ayuu yiri Sadiiq Aadan Cali oo la hadlay Radio Kulmiye.
Doodisho ayaa yiri “Waxay ku xiran yihiin mid ka mida saldhigyada Magaalada Muqdisho, halkaasoo uu baaritaankoodu ka socdo. Haddii dembiile-yaal rasmi ah ay yihiin eedeysane-yaashaasi iyo haddii kalaba, cadaaladaa horkeeni doonnaa, laakiin illaa hadda cadeymaha aanu u hayno iyo ashtakadii dadka ka soo dacwoodaa haynaa, marka waa eedeysane-yaal la rumeysan yahay in ay ku lug lahaayen falalka lagu soo eedeeyay.”
Hawlgalka lagu soo qabtay raggan ayaa ku soo aadaya, xilli dadka reer Muqdisho ay ka cabanayan kooxaha dhaca ka gaysanaya magaalada, gaar ahaan xilliyada habeenkii.
Previous articleSAWIRRO: Booliska suggaya goobaha doorashooyinka oo tababar loo soo xiray
Next articleCumar Filish oo xaflad u sameeyay kooxda Gobolka Banaadir (SAWIRRO)